Imagga: I-API Yokuhlanganiswa Kokubonwa Kwezithombe Inikwe Amandla Yi-Artificial Intelligence | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 11, 2021 NgoLwesine, Februwari 11, 2021 Douglas Karr
Imagga yisixazululo sendawo yonke esisodwa sonjiniyela sonjiniyela namabhizinisi ukufaka ukubonwa kwesithombe kuzingxenyekazi zabo. I-API inikeza inqwaba yezici, kufaka phakathi:
Ukuhlukaniswa kwemikhakha - Hlela ngokuzenzakalela okuqukethwe kwakho kwesithombe. I-API enamandla yokuhlelwa kwesithombe ngokushesha.
Color - Vumela imibala ilethe incazelo ezithombeni zomkhiqizo wakho. I-API enamandla yokukhipha umbala.
Ukusika - Yenza ngokuzenzakalela izithonjana ezinhle. I-API enamandla yokunqampuna okwazi okuqukethwe.
Ukuqeqeshwa Ngokwezifiso - Qeqesha isithombe se-Imagga AI ukuhlela kangcono izithombe zakho ohlwini lwakho lwezigaba.
Ukuqashelwa ebusweni - Vula ukuqashelwa kobuso kuzinhlelo zakho zokusebenza. I-API enamandla yokwakha ukuqashelwa kobuso.
Izilimi eziningi - Okwamanje kunezilimi ezingama-46 ezisekelwa ngama-Imagga's batch, isigaba, kanye ne-tagging APIs.
Akuphephile Ngomsebenzi (NSFW) - Ukulinganiswa kokuqukethwe kwesithombe sabantu abadala okuqeqeshwe kwisimo sobuchwepheshe bokubona isithombe.
Ukumaka - Nikeza ngokuzenzakalela amathegi ezithombeni zakho. I-API enamandla yokuhlaziywa kwesithombe nokutholwa.
Ukusesha Okubonakalayo - Nika amandla ukutholakala komkhiqizo kuhlelo lwakho lokusebenza. I-API enamandla yokwakha amakhono okusesha okubonakalayo.
Ipulatifomu inika amandla ngaphezulu kwezicelo zebhizinisi eziyi-180 emazweni angama-82 anama-startups, abathuthukisi, kanye nabafundi abangaphezu kwe-15,000.
Buyekeza i-Imagga's API Documentation
Ukuqashelwa Kwezithombe Kungasiza Kanjani Amabhizinisi?
Kunezindlela eziningi lapho izinhlangano zingathumela khona ukuqashelwa kwesithombe ukwenza ngcono ukusebenza kwangaphakathi nokwenza ngcono okuhlangenwe nakho kwamakhasimende angaphandle. Nazi ezimbalwa zazo:
Kalula hlela izimpahla zakho zedijithali futhi uzenze zisesheke ngokumaka okuzenzakalelayo, ngezigaba, nangosesho. Uma unenqwaba noma amakhulu wabasebenzisi abafaka izithombe futhi benza ukuphathwa kwempahla yakho yedijithali kube yimfucuza, ukusebenzisa ithuluzi elifana ne-Imagga kungenza izinqubo zakho zisebenze futhi kushayele ukusebenza okuthuthukile kwangaphakathi enhlanganweni yakho.
Thuthukisa ukwenza ngezifiso okuqukethwe okunamandla ngokumaka nokukhipha umbala. Cabanga ukubonisa imikhiqizo abasebenzisana ngayo kakhulu esikhundleni sokuyalela ukuthi bahlunge ngesandla bese bayayikhetha. Ungazenzela ukubeka phambili kokubekwa phambili nokuboniswa kwezithombe ukufanisa ama-personas aziwayo wezivakashi zakho.
Yakha uhlelo lokusebenza noma insizakalo enikezela ngokuzenzakalela impendulo kubasebenzisi bakho ngokuya nge- isithombe abasilayisha. Yileyondlela amandla e-Imagga Isitshalo, uhlelo lokusebenza lweselula olungabona izitshalo, izimbali, ama-cacti, ama-succulents, namakhowe ngemizuzwana.
Yakha ukuhlaba umkhosi okuzenzakalelayo inqubo yezithombe ze-NSFW ukulayishwa ngabasebenzisi kungxenyekazi yakho. Izigaba zifaka izithombe ezinqunu, izingxenye ezithile zomzimba ziveziwe, noma ukutholwa kwangaphansi kwengubo.
Khomba izingxenye noma imikhiqizo ngokubukeka endaweni yokukhiqiza noma yokukhiqiza. ISeoul National University yenze i- Zijabulise ngoDoti Isixazululo esikhombe saphinde saklomelisa abafundi abalahle kahle izinto ezifanele emgqonyeni ofanele wokuphinda usebenzise kabusha.
I-Imagga iphinde inikeze isisombululo lapho inhlangano yakho idinga idatha ephezulu kakhulu, kufanele iqinisekise ubumfihlo, noma idinga ukufinyelela nokungena kwedatha ngenxa yezidingo zomthetho.
Thola ukhiye we-API wamahhala
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaukuthola umbalaukuqashelwa kobusoUkuhlukaniswa kwesithombeukunqampula isithombeukutholwa kwesithombeukuqashelwa kwesithombeukusesha kwesithombeukumaka isithombeukufunda imishiniulimi oluhlukahlukeneakuphephile ukusebenzansfwukusesha okubukwayo